Kirkizy Kickboxer Milaza Fisianà Fanavakavahana Taorian’ny Nandàvany Imasombahoaka ny Fahareseny Tao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2017 12:01 GMT
Mpitsara iray mandrahona handroaka an'i Dastan Sharsheyev, ilay Kirgizy mpiady, taorian'ny nandàvany ny ady sahala nifanaovany tamin'i Anton Kalinin nandritry ny ampahefa-dàlana. Pikantsary avy amin'ny lahatsary Youtube nakarin'ny fantsona Youtube ofisialin'ny TAT Neft Arena.
Dastan Sharsheyev: mpiaro amim-pireharehana ny voninahi-pirenena Kirgizy sa mpanitsakitsaka ny fanahy iraisampirenen'ny fanatanjahantena?
Toa tratry ny daka tsimbadik'i Anton Kalinina i Sharsheyev, Kirgizy iray mpiangaly kickboxing, nandritry ny fifanintsanana tamin'ny 21 Aprily tao an-tanànan'i Kazan, renivohitry ny repoblika federaly Rosianin'i Tatarstan. Im-betsaka nataony torovana ilehio ary tahàka ny nipongatra ho ny matanjaka indrindra tamin'izy roalahy izy nandritra ny tapany faharoa tamin'ilay fifanintsanana tena tsy nitoviana hevitra be tokoa. Kanefa, nomen'ilay Rosiana mpitsara ho an'ni Kalinin ny fandresena.
Mety hoe nifarana teo ny tantara, saingy tsy izany no nitranga. Nandà ny hanaiky ilay fanapahankevitra sy handao ny ringa i Sharsheyev , samy tsy nohajainy na ireo mpitsara na ilay mpifanandrina taminy.
Nandritra ny fifanakalozandresaka namaivay nifanaovan'ireo manampahefana, norahonan'ilay mpitsara ny lalao horoahana tsy ho ao amin'ny firenena i Sharsheyev.
Dia ho voaroaka fotsiny ianao ary tsy ho avela hiverina hiditra eto amin'ny firenena. Fa aiza ary ny fahaizanao misaina e ?
Saingy nijanona teo amin'ny ringa i Sharsheyev, ary tamin'ny fomba nampivarahontsnaa no nakàny ny mikrô hitenenana tamin'ireo olona marobe:
Arahaba, ry Tatarstan malala! Fanindroany aho izao no eto, mahafinaritra ny vahoaka eto. Te-hilaza aminareo ny zavatra hitako aho; nandresy aho. Ny TNA dia fifanintsanana izay tokony ho tsy mitanila ny zavatra rehetra atao ao, tokony tsy hitanila ny mpitsara ao, ary ny lehiben'ny mpitsara. Ary izay tokoa ve no nisy androany? [Namaly ny olona hoe “Tsia!”] Araka izany manontania ny tenanareo : Aiza ny marina eto amin'ity tontolo ity? Aiza? Sa manova zavatra ny lokon'ny hoditro? Misaotra anareo rehetra nanohana ahy. Miaraka aminareo i Dastan!
Nahazoan'i Sharsheyev fanohanana goavana tao amin'ny media sosialy Kirgizy ny teny nataony. Lahatsoratra iray momba ilay lohahevitra no nozaraina efa in-1.300 mahery.
Ady tonga indrindra tao anatin'ny fotoana izay izakàn'ireo Kirgizy an-tapitrisa mpifindramonina ao Rosia ny fanarahamaso faran'izay henjana tsy toy ny mahazatra, taorian'ilay fanapoahana baomba tao amin'ny fiarandalamby ambanin'ny tany ao St Petersburg, izay nolazaina fa nataon'i Akborjon Akilov, ilay Kirgizistàna mizaka ny zom-pirenena Rosiana. Ny marina dia niteraka resabe sy ratsy mihitsy aza ny hoe tao Tatarstàna no natao ilay ady, Repoblika Rosiana izay raha kely indrindra dia Miozolmàna ny antsasaky ny mponina ao, ary miteny fiteny iray toy ny hoe manana fiaviana Tiorka ny Kirgizy.
Tany amin'ny faran'ny fitenenany nipoapoaka ho an'ireo Rosiana, niteny i Sharsheyev, izay nisatroka kalpak Kirgizy iray, hoe “Alga Kyrgyzstan” adika hoe “Kyrgyzstan Mirosoa” amin'ny teny Tiorka maro ka isan'izany ny Kirgizy sy Tatar.
Nitarika ady teo amin'ny Rosiana sy Kirgizy tao amin'ny Youtube ilay tsy fandehanan-javatra, izay nanasongadina ny andianà fanivaivana foko efa mahazatra. Nilaza ireo mpikarakara fa mihevitra ry zareo ny hanilika an'i Sharsheyev tsy ho afaka intsony handray anjara amin'ireo fifaninanana hoavy ao Rosia.
Tsy misy fanambaràna, anefa, natao momba ny hoavin'ilay mpitsara ny lalao, izay niteny imasombahoaka ny amin'ny fahefan'ireo manampahefana Rosiana miandraikitra ny fifindràmonina sy ireo mpiandraikitra ny fonja tamin'ireo fanehoankevitra nataony tamin'i Sharsheyev.